Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 42
Manana ny fifandraisana amin'ny fizika ara-batana na hafa amin'ny vatan'ny olombelona ve ny fotoana ao anatin'ny fisaratsarahana mankany amin'ny taona, volana, herinandro, andro, ora, minitra ary segondra? Raha eny, inona ireo fifanintsanana?
Misy fifandraisan'ny tadidin'ny masoandro sy ny volana ary ny planeta ary ny fomba fiasa ara-batana ao amin'ny vatan'olombelona, ​​fa ny fizarazaran'ny fifandirana mekanika an'ny olombelona dia tsy marina.
Izao rehetra izao dia maneho ny rehetra izay afaka mahita na takatry ny lanitra na habaka; Ity rehetra izao dia mifanitsy amin'ny vatan'ny olona; Ny felam-kintana, ohatra, dia mifandraika amin'ny nerveo sy ny ganglia ao amin'ny vatana. Ny masoandro, ny volana, ny tany, ary ny kintana antsoina hoe planeta miaraka amin'ny satelita na volana misy azy dia mihetsika ao amin'ny atmosfera manokana.
Raha miresaka na mihevitra ny fotoana ho "fifandimbiasan'ny zava-mitranga amin'ny tontolo rehetra" dia voamariky ny fihetsehan'ireo antsoina hoe vatan'ny lanitra any an-habakabaka, ary ny fiovana sy ny zava-mitranga vokatr'izany eo amin'ny tany, dia misy ifandraisan'izany. toe-javatra sy ny vatan'olombelona ara-batana miaraka amin'ny fizotrany ara-batana sy ny fiovana sy ny vokatra vokatr'izany. Saingy tsy tsara amin'ny fiarovana ny ahitantsika ireo zavatra ireo; fandrao hanokatra ny boaty Pandora isika.
Zava-dehibe sy ampy hahalalanao fa misy mikraoba roa ao amin'ny vatan'olombelona izay maneho ary mifanitsy amin'ny masoandro sy ny volana. Ny rafi-pampivoarana ao amin'ny vatana dia mifandraika ary mifandraika amin'ny rafitry ny masoandro. Saingy ny taova tsirairay ao amin'ny rafitra solar dia manana taova mifanentana ao amin'ny vatana. Ny voa sy tany ao amin'ilay rafi-pamokarana dia vokatry ny asan'ny taova ao anaty vatana mifanaraka amin'ny masoandro sy ny volana. Ny votoatiny na ireo sombin-javatra vokatry ny fihetsik'ireo taova, mifandraika ary mifandraika amin'ny planeta, manatanteraka ny asany amin'ny alàlan'ireo rafitra samihafa ao amin'ny vatana, ary miara-miasa ao amin'ny toekarena ankapobeny amin'ny vatana ny vanim-potoana iainany. mba hahatanteraka ny asa manokana izay atokan'ny ain'ny vatana.
Ao amin'ny vatana ny fitsipika iray izay solontenan'ny sy mifanaraka amin'ny masoandro. Mihemotra sy miakatra na manodidina ny vatana izy io, satria ny masoandro dia voalaza fa manao faribolana iray manontolo amin'ny alàlan'ny famantarana roa ambin'ny folo amin'ny zodiac. Avy amin'ireo marika famantarana mifandraika amin'ny lohan'olombelona, ​​midina amin'ny homamiadana famantarana, mifanandrify amin'ny tratrany na ny tratrany, ny libra famantarana mifanaraka amin'ny toerana (tsy ireo taova) amin'ny firaisana ara-nofo ary amin'ny alàlan'ny marika capricorn. mifanandrify amin'ny hazondamosina any amin'ny faritra ao am-po, ary miverina hamoha ny lohany indray, mandalo ny mikraoba na ny masoandro amin'ny alàlan'ny famantarana ny zodiak amin'ny fotoanan'ny dia andiany solar iray. Ao amin'ny vatana iray misolo tena ny germ ny volana. Ny mikraoba mando dia tokony handalo amin'ny famantarana rehetra ny zodiakony. Na izany aza dia tsy ny zava-drehetra no mitranga. Ny zodiak ny volana dia tsy ny zodiak'izao rehetra izao. Manao revolisiona ny volana amin'ny alàlan'ny zodiac ao amin'ny vatana ao anatin'ny sivy amby roapolo sy andro iray, mitovy amin'ny volana volana. Rehefa feno ny volana dia ao anaty aroe ny zodiakany ary ny germiora mifanandrify aminy ao amin'ny vatana dia tokony ho ao amin'ny lohany; ny ampahefany farany dia ny homamiadan'ny zodiaka sy ny tratran'ny vatana; ny aloky ny volana nitodika tany amin'ny volana vaovao dia ny libra ny zodiaka ary avy eo ny faritra ny fanjakany ao amin'ny vatana. Amin'ny tapany voalohany amin'ny volana dia ao anaty capricorn izy ary ny mikraoba ara-batana dia tokony hiaraka amin'ny tadidin'ny hazondamosina mifanohitra amin'ny fo, ary avy eo dia tokony hiakatra ho any an-doha ny mikraoba vatana, rehefa feno ny volana ny famantarana azy . Koa ny taona solar sy ny volana mafana dia voamarika ao amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny fandalovan'ny germs solontenany amin'ny vatana.
Ny herinandro angamba no refesin'ny fotoana tranainy indrindra amin'ny kalandrie olombelona. Voarakitra ao anatin ny alimanaka ny olona taloha. Ny olona maoderina izao, tsy maintsy nindramin'izy ireo. Ny andro tsirairay amin'ny herinandro dia mifandraika amin'ny masoandro, ny volana ary ny planeta, izay anaovana andro. Ny fiainan'ny vatan'olombelona dia mifandraika amin'ny fisehoan'ny rafitra solar iray. Ny herinandro ao amin'ny vatan'olombelona dia mifanaraka amin'ny fepetra kely kokoa.
Ny andro, izay fiovan'ny tany indray mandeha manodidina ny axis dia iray amin'ny vanim-potoana fito amin'ny herinandro, ary ao aminy no aseho indray ny vanim-potoana lehibe kokoa. Ao amin'ny vatan'olombelona, ​​ny mikraoba na ny fitsipika mifandraika amin'ny tany dia manao ny boribory iray manontolo amin'ny alàlan'ny rafitra manokana azy, izay mifanandrify amin'ny revolisiona eto an-tany. Ireo fehezan-teny ireo, ny herin'ny masoandro sy ny volana, ny volana mafana, ny herinandro, ny andro miaraka amin'ny fandidiana ara-batan'ny vatan'ny olona. Misy fepetra marobe hafa momba ny "fifandimbiasan'ny fihanaky ny zava-mitranga eto amin'izao rehetra izao" izay mifanaraka amin'ny zavatra vita amin'ny vatana sy ny dingana ao amin'ny vatan'olombelona. Saingy mandritra ny ora sy minitra ary faharoa, dia azo atao ny mitaky karazana fitoviana misy eo amin'ny universal sy ny toe-batana dia mitaky karazana fitoviana eo amin'ny zava-misy amin'ny ankapobeny sy ny toe-batana. Ny ora, ny minitra ary faharoa dia azo lazaina ho fepetra maoderina. Rehefa novana ny fepetra antsoina hoe faharoa dia noheverina fa ho fohy izany fe-potoana izany dia tsy mila fanandramana hampielezana azy akory. Ny siansa ara-batana dia nanao fahadisoana mitovy rehefa nomen'izy ireo anarana ny atoma tamin'ny ampahany minitra izay noheverin'izy ireo ho singa voalohany. Taty aoriana dia tsikaritr'izy ireo fa "atoms" ho an'izao rehetra izao ireo "atom" ireo, ny fizarazarana izay nomena anarana hoe elektronika, ion, na dia mety tsy fizarana farany toy izany aza ilay ion. Ny vatan'olombelona dia fehezina ary tokony hihetsika mifanaraka amin'ny zava-mitranga eto amin'izao rehetra izao, fa ny olombelona kosa manelingelina ny fizotran'ny voajanahary sy ny fiasa mahazatra. Avy eo izy tonga dia sahirana. Ny fanaintainana, ny fijaliana ary ny aretina dia vokatry, izay fizotran'ny voajanahary ao amin'ny ezaka ao amin'ny natiora mba hamerenana amin'ny laoniny ny toe-javatra mahazatra. Ireo fizotran-javatra ao amin'ny vatan'olombelona ireo dia misy ifandraisany amin'ny fifandirana sy ny cateclysms amin'ny natiora, mba hitazomana ny fitoviana. Raha toa ka miara-miasa amin'ny tenany ny olona ao amin'ny vatany ary tsy mifanohitra be loatra amin'ny natiora, dia hianatra ny fitoviana marina eo amin'ny faritra tsirairay ao amin'ny vatany sy ny ampahany mifanentana aminy eo amin'izao rehetra izao sy ireo fomba fijeriny.